Ngwa Konya New Motorized Industrial Site Ngwa | RayHaber
[06 / 12 / 2019] Companylọ ọrụ Turkish Wire Bulgaria Onye Mgbapụta Mkpa Mgbapụta Bulgaria	35 Bulgaria
[06 / 12 / 2019] Nzọụkwụ A Ga-ewega maka Project Sakarya Rail Sistem	54 Sakarya
[06 / 12 / 2019] Muratli District nke Tekirdag Railway Splitting	59 Tekirdag
[06 / 12 / 2019] CHP Gürer jụrụ Minista Turhan zara ya: Housinggba Housinglọ CDlọ TCDD	06 Ankara
[06 / 12 / 2019] Olile anya na Vangölü Express Adventure dị mma!	65 Van
HomeTurkeyCentral Anatolia Region42 KonyaNgwa Konya New Motorized Industrial Site Extended
01 / 08 / 2019 42 Konya, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
ngwa oru njem ugbo ala
Konya Metropolitan Mayor Ugur Ibrahim Altay, Old Industry na Karatay Mmepụta n'ime ogo nke ọrụ maka New Motorized Industrial Zone 2 gbatịkwuru ruo Fraịde, na-achọ.
Emegoro itinye oge itinye aka n'ọrụ maka mpaghara Mkpogharị Ọhụụ nke Motorized ga-enweta site na njikọta nke TOK Project n'ime oke nke Mpaghara Mpaghara Urban Transformation Project nke Obodo Konya.
Uğur İbrahim Altay, Onye Isi Obodo nke Konya Metropolitan, kwuru, açık Site n’arịrịọ nke ndị obodo ibe anyị; Anyị na-etinye ngwa na Konya Motorized Industrial Estate ruo 02.08.2019 Fraịdee. Oge a ga-abụrụ ụmụnna anyị ndị nwoke na ndị nwanyị akwụkwọ ha furu efu. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ ndebanye aha anyị agafeela 15.00. Ka Chukwu siri, ”
31 na Eski Sanayi na Karatay Sanayi December Na mpaghara motorized ọhụrụ ebe ndị azụmaahịa na-arụsi ọrụ ike tupu 2018 nwere ike itinye akwụkwọ; ebe azụmahịa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, ụlọ ọrụ ọha, agụmakwụkwọ, ahụike, mpaghara ọrụ obodo na ụlọ ọrụ mmekọrịta, ebe egwuregwu, ụlọ ọrụ mmanụ, ụlọ ọrụaka na ụlọ alakụba ga-eme.
2 Tarsus Kemalpaşa Mmeputa na-echekwa Asphalt maka Afọ Yıldır
Aliağa - Çandarlı - Bergama New Railway na…
Ụlọ ọrụ TCDD dị ọhụrụ
Ndi oru ugbo ala nke ndi oru ugbo ala nke…
TCDD Transportation weebụsaịtị ọhụrụ!
Nleba Onwe Onye Okike: MT 5700 Modị Mgbapụta Ọdụ ụgbọelu General…
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 5 July 1952 2 si Germany…
Mara Prozụta Ihe: Circuit Na-achịkwa na Hekimhan Garda Bulunan
KARSAN gbakwunyere eletriki eletrik eji eme ka ọ bụrụ ihe atụ